Ahoana ny fomba hahatonga ny WhatsApp ho azo antoka kokoa sy hanakanana azy tsy hangalatra | Vaovao momba ny gadget
Ahoana ny fomba hahatonga ny WhatsApp ho azo antoka kokoa sy hanakanana azy tsy hangalarina
WhatsApp izao no lasa lehibe indrindra, ary indraindray irery ihany, fitaovam-pifandraisan'ny mpampiasa. mpampiasa mihoatra ny iray lavitrisa napetrakao amin'ny fitaovanao izany. Ny fahatokiana fampiharana iray ho an'ny fifandraisana rehetra eto amintsika dia mety hanjary olana, indrindra raha tsy mitandrina isika.
Ny Windows an'ny Windows dia notafihan'ny hackers foana, satria io no rafitra miasa be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao. Saingy, satria ny fitaovana finday dia nanjary fitaovana lehibe hampiasana, nanolo PC matetika, mila mitandrina manokana amin'ny finday avo lenta isika.
Ny fiarovana ny kaonty WhatsApp-tsika dia dingana tsotra ary tsy manana fahasarotana lehibe, raha toa ka mampihatra ny saina. Etsy ambany izahay dia mampiseho toro-hevitra isan-karazany raha tianao ny Ho azo antoka ny kaonty WhatsApp ary tsy misy olona afaka mangalatra azy aminao.
Arovy ny kaonty WhatsApp anay Dingana iray tena tsotra izay tsy mitaky fahalalana lehibe ary azontsika atao amin'ny fomba roa samy hafa, na avy amin'ny fampiharana na avy any ivelany.
1 Arovy ny kaonty WhatsApp anao avy ao anatiny
1.1 Aza miraharaha ireo hafatra izay andefasan'ny WhatsApp antsika
1.2 Mitandrema amin'ny rohy
1.3 Akatony ireo seha-tranonkala izay nosokafanay tamin'ny solosaina na takelaka
1.4 Arovy ny fidirana amin'ny fampiharana
1.5 Alefaso ny fanamarinana XNUMX-dingana
2 Arovy any ivelany ny kaonty WhatsApp anao
2.1 Arovy ny fidirana amin'ny finday avo lenta
2.2 Mitandrema amin'ny fampiharana izay manolotra anao hiaro ny kaontinao WhatsApp
3 Ahoana ny fanarenana ny kaonty WhatsApp
Arovy ny kaonty WhatsApp anao avy ao anatiny
Aza miraharaha ireo hafatra izay andefasan'ny WhatsApp antsika
WhatsApp tsy mifandray aminay velively amin'ny alàlan'ny lampihanao ianao. Isaky ny mila mandefa hafatra fanamafisana aminay ianao rehefa misoratra anarana, manova ny nomeraon-telefaoninay na mila manamarina ny mombamomba anay dia ataonao amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra hatrany izany.
Raha mahazo hafatra amin'ny alàlan'ny WhatsApp ianao milaza fa io no sehatra io, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia tatero amin'ny lampihazo ilay isa mba hisorohana ny olon-kafa tsy ho voafitaka ka hangalatra ny kaontiny. Manaraka izany, raha vao voalaza ny nomeraon-telefaona milaza azy ho WhatsApp dia tokony hamafana avy hatrany ilay hafatra ianao.
Ireo hafatra azon'ilay sehatra fandefasan-kafatra mandefa antsika amin'ny alàlan'ny rindrambaiko, dia hangataka hatrany ny kaody izay azontsika tamin'ny alàlan'ny SMS, kaody ilaina raha sanatria ka mametraka WhatsApp amin'ny fitaovana hafa mifandraika amin'ilay nomeraon-telefaona iray ihany izahay. Ilaina io code io eny na eny hamafiso fa izahay no tompon'ny nomeraon-telefaona.
Mitandrema amin'ny rohy
Amin'ny sary izay mitarika ny fizarana teo aloha, afaka mahita rohy isika, rohy izay mitarika antsika amin'ny tranokala WhatsApp, noho izany dia azo antoka tanteraka izany ary tsy hanana olana amin'ny kaontinay izahay. Na izany aza, raha mahazo hafatra misy rohy mankamin'ny tranokala tsy WhatsApp izahay, milaza ho serivisy fandefasan-kafatra, tsy tokony hoterentsika mihitsy izany ary mainka mainka hiditra izay karazana data angatahinao.
Akatony ireo seha-tranonkala izay nosokafanay tamin'ny solosaina na takelaka
Miankina amin'ny isan'ny ora laninay eo alohan'ny solosaina, dia azo inoana fa mihoatra ny indray mandeha isika miresaka amin'ny alàlan'ny WhatsApp Web, ny serivisy ahafahantsika mampiasa WhatsApp avy amin'ny mpitety tranonkala. tsy mifandray amin'ny terminal anay, foana rehefa eo.
Raha mampiasa solosaina samihafa isika hifandraisana amin'ny kaonty WhatsApp misy antsika, ny solosaina izay tsy antsika dia ny tsara indrindra azontsika atao mivoaka isaky ny tsy mampiasa azy intsony isika. Amin'izany no hanakanantsika ny olon-kafa tsy afaka miditra amin'ireo solosaina ireo hahita ny resaka efa notehirizinay tao amin'ny fitaovantsika.
Arovy ny fidirana amin'ny fampiharana
Mamela antsika i WhatsApp arovy ny fidirana amin'ny fangatahana mba hisorohana ny olona eo amin'ny tontolo iainantsika tsy hiditra amin'ny fitaovantsika, raha fantatr'izy ireo ny kaody mamoha ny terminal na raha nafoinay vetivety izy io nefa tsy nanakana. Na inona na inona terminal Android na iOS hampiasantsika kaody fampandehanana dia tsy maintsy miditra isika Fikirana> Kaonty> Tsiambaratelo sy hidin-trano.
Raha Android ny fitaovantsika, dia tsy maintsy miditra amin'ilay rindranasa isika ary miditra amin'ny Fikirana
Alefaso ny fanamarinana XNUMX-dingana
Ny fanamarinana dingana roa dia lasa iray amin'ireo fomba azo antoka hiarovana ny kaontintsika ary androany dia atolotry ny ankamaroan'ny orinasa lehibe manolotra serivisy na fampiharana amin'ny Internet ho an'ny finday. Ity rafitra fiarovana ity, azo jerena ao amin'ny WhatsApp ihany koa izany.
Ny fiasan'ny fanamarinana amin'ny dingana roa ao amin'ny WhatsApp dia ahafahantsika mametraka kaody 6-digit, cKaody hampiasaina rehefa mametraka ny fampiharana amin'ny fitaovana finday vaovao. Raha tsy misy an'ity kaody ity dia tsy azo atao ny miditra amin'ny kaonty WhatsApp, ka tsy tokony hizara azy ireo amin'ny olon-kafa mihitsy isika.
Arovy any ivelany ny kaonty WhatsApp anao
Arovy ny fidirana amin'ny finday avo lenta
Na dia toa hafahafa aza izany ary na eo aza ny zava-misy fa ny rafitra rehetra dia manolotra rafitra fiarovana sasany amintsika, mbola afaka mahita mpampiasa maro isika izay tsy manana rafitra fiarovana amin'ny finday avo lenta, na amin'ny alàlan'ny dian-tanana, amin'ny alàlan'ny lamina iray, mamaha kaody na amin'ny alàlan'ny rafitry ny fanekena ny tarehy.
Mitandrema amin'ny fampiharana izay manolotra anao hiaro ny kaontinao WhatsApp
Indraindray, amin'ny Android, ny rindranasa izay milaza fa miseho ao amin'ny Android Play Store manomeza anay fiarovana fanampiny amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra be mpampiasa eran'izao tontolo izao. Ireo karazana rindranasa ireo dia tsy manitatra ny fiarovana efa natolotry WhatsApp antsika, ary ny hany zavatra azontsika atao raha apetrantsika izy ireo dia ny fangalaran'izy ireo antsika amin'ny kaontinay.
Ahoana ny fanarenana ny kaonty WhatsApp
Raha manana ny tsy fahombiazana amin'ny fahaverezan'ny fidirana amin'ny kaontintsika isika, ny hany fahafaha-manaony haka ny kaontintsika dia amin'ny alàlan'ny mailaka tsotra, amin'ny alàlan'ny mailaka support@whatsapp.com, mailaka izay tsy maintsy andefasanay ireto fampahalalana manaraka mifandraika amin'ny kaontinay ireto:
Laharana an-telefaona ny kaonty WhatsApp, ao anatin'izany ny kaody firenena.
Modely faranyl avy amin'ny toerana nampiasantsika WhatsApp.
Famaritana ny zava-nitranga. Raha te hahazo valiny haingana araka izay azo atao isika dia tsy maintsy manoratra ny mailaka amin'ny teny anglisy. Raha soratantsika amin'ny teny Espaniôla dia azo inoana fa na ny valiny manamafy na ny valiny ratsy avy amin'ny WhatsApp dia haharitra ela kokoa noho ny nandrasana.
Raha ny antony angatahinao hamerina ny kaontinao dia tsy misy ifandraisany amin'ny halatra azy, fa naato aloha ny kaontinao, inoana fa tamin'ity indray mitoraka ity no ho farany ary tsy ho azonao ny maka ny kaonty WhatsApp mifandraika amin'ny nomeraon-telefaoninao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ahoana ny fomba hahatonga ny WhatsApp ho azo antoka kokoa sy hanakanana azy tsy hangalarina
Fiakaran'ny vidin'ny HBO any Espana: 8,99 euro isam-bolana izy ireo izao
Ahoana ny fomba fampidinana mozika avy amin'ny Spotify